सडक छेकेर निर्माण सामाग्री राखे एक वर्ष कैद - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सडक छेकेर निर्माण सामाग्री राखे एक वर्ष कैद
प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०७५, सोमबार August 13, 2018
काठमाडाैँ । घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? वा घर भत्काउँदै पो हो कि? वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने याेजनामा हुनुहुन्छ? यदि हो भने, सावधान हुनुहोस्, कतै तपाइँले राखेका निर्माण सामाग्रीले सवारी तथा पैदल आवगमनलाई अवरोध त पुर्याएकाे त छैन? घर निर्माण गर्दा पनि जथाभावी सडकमै निर्माण सामाग्री थुप्राउने निर्माणकर्ता अब कानूनी कठघरामा उभिने भएका छन्।
भदौ १ देखि प्रचलनमा आउने नयाँ कानूनमा निर्माण सामाग्री जथाभावी राख्न नपाइने व्यवस्था छ। यस्तै निर्माण र भत्काउँदा वा मर्मतसम्भार गर्दा आवश्यक सावधानीसहितका आवश्यक बन्दोबस्त गर्न कानूनले बाध्य बनाएको हो। यो व्यवस्था ऐनमै उल्लेख छ।
यदि ऐन विपरितको कसुर गरेको ठहर भए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ। मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका पाँच वटैसंहिता भदौ १ गतेदेखि प्रचलनमा आउने छन्। याेसँगै जंगबहादुर राणाले विक्रम सम्वत १९१० मा बनाएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुने भएको हो। जंगबहादुरले सुरुमा १६३ महलको ऐन बनाएका थिए। भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनको रुपमा प्रचलनमा ल्याइएको थियो।
जंगबहादुरले निर्माण गरेको पहिलो लिखित कानून ५५ वर्षपछि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता ऐनले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्।
प्रचलनमा आउने संहिताले मुलुकी ऐनमा रहेका सबै अपराधलाई समेटेको छ। हाल प्रयोगमा आएका केही नयाँ अपराधमा दण्ड र सजायको व्यवस्था थपिएको छ। यसले अनुसन्धानकर्ता रहने प्रहरी र अभियोजनकर्ता रहने सरकारी वकिलका केही अधिकारी कटौती गर्नुका साथै थप जिम्मेबार बनाएको छ।
केही बुँदामा भने प्रहरीको अनुसन्धान पद्धति प्रभावित हुने आशंका समेत ब्यक्त गरिदैछ। प्रचलनमा आउने संहितामा धर्म परिवर्तन, दाईजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, पशुपंक्षीलाई गर्ने निर्दयी व्यवहार, गाली बेइज्जती, पतिले पनि संम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, जथाभावी घर निर्माण गर्न नहुने लगायतका विषयलाई स्पष्टसँग कसुर ठहर गर्दै कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ।